China Signage ifektri kanye nabaphakeli | Isi-Donghua
Ilula futhi ihlala isikhathi eside kunezimpawu zensimbi noma zokhuni, izimpawu zepulasitiki zingamelana nezimo zangaphandle ngokufiphala okuncane, ukuqhekeka, noma ukonakala. Futhi amapulasitiki angabunjwa noma afakelwe ngemininingwane ebekiwe edingekayo ekubonisweni noma ekusayinweni futhi kungenziwa ngemibala ehlukahlukene yangokwezifiso. UDhua unikeza ngezinto zeshidi leplastiki le-acrylic lezimpawu futhi unikeza ubuqili bokwenza.
• Izimpawu zezinhlamvu zesiteshi
• Izimpawu zikagesi
• Izimpawu zasendlini
• Izimpawu ze-LED
• Amabhodi emenyu
• Izimpawu zeNeon
• Izimpawu zangaphandle
• Izimpawu ze-Thermoformed
• Izimpawu zokuthola indlela
Izinto ezisayinisa izimpawu ezivela ku-DHUA zihlanganisa amabhodi okukhangisa, amabhodi wamaphuzu, izimpawu zezitolo ezidayisa ezitolo kanye nezikhangiso zokukhangisa eziteshini zezokuthutha. Imikhiqizo ejwayelekile ifaka izimpawu ezingewona ugesi, amabhodi ezikhangiso edijithali, izikrini zamavidiyo nezimpawu ze-neon. I-Dhua ikakhulu inikela ngezinto ze-acrylic ezitholakala ngokujwayelekile, namashidi wokusika nosayizi nokwenziwa ngokwezifiso kohlelo lokusebenza lwezimpawu.
Izimpawu ze-acrylic ishidi lepulasitiki elinesiphetho esicwebezelayo. Iza ngemibala eminingi ehlukahlukene kufaka phakathi iqhwa futhi icacile. Lolu hlobo lwezimpawu lunesisindo esincane futhi luhlala isikhathi eside ekusetshenzisweni kwangaphandle nangaphakathi. Kubuye kuguquguquke ngokweqile ukulingana nanoma yimuphi umklamo. Kunokusetshenziswa okuningi okuhlukahlukene okwenza lokhu kube uphawu oluthandwa kakhulu.